 » တိုက်တေနီယမ်
According to the impurity content, titanium is divided into high-purity titanium (purity up to 99.9%) and industrial pure titanium (purity up to 99.5%). Industrial pure titanium has three grades, အသီးသီး, with TA + sequential number of numbers 1, 2, 3, the larger the number, the lower the purity.
သင်: 4.507 g/cm3, ညနေ: 1688 ℃. isotropic အသွင်ပြောင်းနှင့်အတူ, ≤ 882.5 αအဆင့်၏သိပ်သည်းဆဋ္ဌဂံဖွဲ့စည်းပုံ, ≥ 882.5 ℃ခန္ဓာကိုယ်ဗဟိုပြုကုဗဖွဲ့စည်းပုံβ-အဆင့်. သန့်စင်သောတိုက်တေနီယမ်သည်ခွန်အားနည်းသည်, ဒါပေမယ့်တိကျခိုင်မာတဲ့စွမ်းအားမြင့်မားတယ်, plasticity ကောင်းတယ်, ကောင်းသောနိမ့်သောအပူချိန်အကြမ်းခံမှု, နှင့်မြင့်မားသော corrosion ခုခံ. တိုက်တေနီယမ်သည်ကောင်းမွန်သောဖိအားပေးသောစက်လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, ဖြတ်တောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသည်. တိုက်တေနီယမ်သည်နိုက်ထရိုဂျင်အပူပေးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်အပူနှင့်ဂဟေဆော်ရာတွင်တိုက်တေနီယမ်ကိုအာဂွန်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ကာကွယ်သင့်သည်.
မသန့်ရှင်းသောအကြောင်းအရာများသည်တိုက်တေနီယမ်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်, အညစ်အကြေးအနည်းငယ်ကိုတိုက်တေနီယမ်၏အစွမ်းသတ္တိကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်စက်မှုသန့်စင်တိုက်တေနီယမ်၏အစွမ်းသတ္တိသည်မြင့်မားသည်, အစွမ်းထက်လူမီနီယမ်အလွိုင်းအလွိုင်းအဆင့်နှင့်နီးသည်, petrochemical heat exchangers များထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကအားဖြင့်သုံးသည်, ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ, သင်္ဘောအစိတ်အပိုင်းများ, လေယာဉ်အရေခွံ, စသည်တို့. အပူချိန်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည် 350 ℃.
www.DeepL.com/Translator နှင့်ဘာသာပြန်သည် (အခမဲ့ဗားရှင်း)